China esd pp incence ibhokisi yengeniso yoMvelisi kunye noMthengisi | Sihai
I-ESD iphetshana lebhokisi engeniso
Kk incence sheet sheet ingeniso yenziwa yiphepha lephepha, iphepha le-corrugated sheet diecut eguquguqukayo ngebhokisi yesayizi eyahlukeneyo, ibhokisi yemilo eyahlukeneyo yokupakisha, ibhokisi iphambili isetyenziselwa imveliso, ukuhanjiswa, ukuthunyelwa kunye nokupakisha. Ngokwesi sicelo sokupakisha iimveliso ezahlukeneyo, ibhokisi yengeniso ine-ESD pp ibhokisi incence kunye nebhokisi yengeniso eqhelekileyo, ngokweenkcukacha ezahlukeneyo zokumelana nomphezulu, i-ESD pp ibhokisi engenanto ine-ESD ibhokisi yebhokisi kunye ne-Conductive pp ibhokisi enamanzi, i-ESD pp ibhokisi engenanto Ukuchasana nomphezulu li-106 - 109, kunye ne-conductive ibhokisi yenkunkuma yebhokisi yokumelana nomphezulu yi-103 - 105. I-PP incence ibhokisi yengeniso ye-ESD luhlobo olutsha lwezinto zokupakisha ezikhuselekileyo, ezisetyenziswa kakhulu ekulayisheni ingeniso, ukupakisha, ukugcinwa kunye nokuthuthwa kwezixhobo zombane kunye neemveliso kwinkqubo yemveliso.
Ngokwesiqhelo, i-pp incence ibhokisi ye-esd yengeniso isebenzisa i-2-6mm eshinyeneyo ye-ESD iphepha elenziwe ngenkcenkce elenziwe, i-GSM ngokokwenza imveliso eyahlukileyo eyahlukeneyo yephepha eliqinileyo, ngokutsho kwebala elihlukeneyo, inokwenziwa ibhokisi yengeniso, ibhokisi yokupakisha, isikhongozeli sengeniso, ukupakisha Isikhongozeli, ibhokisi ye-ESD, ibhokisi yengeniso ye-ESD kunye nebhokisi yokupakisha ye-ESD, ibhokisi yokugcina izinto kunye nebhokisi yokugcina, ibhokisi yeplastikhi, iziqhamo zebhokisi yeziqhamo, ibhokisi engenayo emileyo, ibhokisi yeplastiki eqhubayo, ibhokisi yelangatye ebuyisa umlilo, isahlulo sebhokisi yengeniso , Ibhokisi yengeniso yesiselo, ibhokisi yengeniso yokubulala izitshabalalisi, ibhokisi yokupakisha ukutya kunye nemifuno, ibhokisi yengeniso yeplastiki, izixhobo ezichanekileyo zokupakishwa kwangaphakathi, iibhokisi zokupakisha amayeza, iibhokisi zeposi, izinto zokupakisha zombane, ipleyiti yokwaleka, ukupakisha umaleko weplastiki njl.
IP) incindi yebhokisi yengeniso ye-ESD Iimpawu:
Inempawu zokumelana nokusonga, ukumelana nokuguga, amandla amakhulu okuthwala, ukuzoba, uxinzelelo, ukukrazula, iqondo lobushushu eliphezulu kunye nombala osisityebi. Yenziwe kwibhokisi yohlobo lwebhokisi ejikelezayo, enokusetyenziselwa ingeniso kunye nokupakishwa kwemveliso egqityiweyo. Ubunzima bokukhanya, bomelele kwaye buqinile. I-pp yenkunkuma ye-ESD ibhokisi yengeniso ngokweemfuno zomsebenzisi zingenziwa ngokweziqulatho ezahlukeneyo, ubukhulu, i-aluminium ingxubevange yomphetho, inokubanjiswa, ingabi nothuli, intle kwaye inesisa imbonakalo.
pp ibhokisi engenayo ye-esd yenzelwe kwaye yenziwa ngokobungakanani obubonelelwe ngabathengi, ukwenzela ukufezekisa ukulayishwa okufanelekileyo, kwaye iibhokisi ezininzi zinokuhamba, zisebenzise ngokufanelekileyo indawo yokusebenzela, zonyuse indawo yokugcina izinto, kwaye zigcine iindleko zemveliso.
Iphepha elingenanto kwiphepha le-ESD lokufaka izicelo zebhokisi:
Kk ibhokisi engenayo ye-esd engenayo isetyenziswa kakhulu kumashishini amaninzi, inokuphelisa umbane ongashukumiyo, inani elikhulu lezinto ze-elektroniki kunye neemveliso kwinkqubo yemveliso yokulayisha, ukupakisha, ukugcinwa kunye nokuthuthwa.
Xa kuthelekiswa neemveliso zenaliti, iphepha elingenanto kwiphepha lebhokisi ye-ESD inezibonelelo zokungothuswa, uyilo oluguquguqukayo, ubume obuguqukayo kwaye akukho mfuneko yokuvula ukungunda kwenaliti. Kwangelo xesha, izinto zinokulawulwa ngokuguqukayo ngokudibanisa izinto ezingashukumiyo, izinto ezisisiseko zokuqhuba, njl., I-ESD pp iplati engenanto inokuvelisa ngemisebenzi eqhubayo kunye neyochasayo. Ubume bokumelana nokusebenza kwebhodi ye-anti-static pp inokulawulwa phakathi kwe-103 kunye ne-109.
Iimveliso zephepha elingenanto zisetyenziswa ikakhulu kwi-elektroniki, ukupakisha, oomatshini, ishishini elikhanyayo, inkonzo yeposi, ukutya, amayeza, isibulali zinambuzane, izixhobo zasekhaya, intengiso, umhombiso, izinto zokubhala, itekhnoloji yemagneti ebonakalayo, amayeza obunjineli kunye nempilo namanye amashishini. Ngaba luhlobo olutsha lwezixhobo zokupakisha ukhuselo lokusingqongileyo.
Okulandelayo: I-esd iphe